रोचक – SUDUR MEDIA
October 7, 2021 AdminLeaveaComment on यी राशिका व्यक्ति पाइला पाइलामा झुट बोल्छन् सधैँ रहनुहोस् सावधान……
एक असल मानिस पनि झुट बोल्ने बानीको कारण खराब व्यक्तिमा गनिने गर्छन्। झुट बोल्न व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि झुट बोल्ने गर्छन्। राशीले हरेक मानिसको व्यक्तित्व बारे बताउने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार झुट बोल्न चलाख राशीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। मेष राशीः मेष राशी भएका वयक्तिहरु स्पष्ट व्यवहार गर्न रुचाउँछन् । यो राशी भएका व्यक्ति […]
एजेन्सी । हामीलाई थाहा छ कि डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि खानु हुँदैन । तर सामान्यतय टाउको दुखेदेखि झाडावान्ता हुँदा भने कुन औषधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘कन्ठ’ जस्तै भइसकेको हुन्छ र यस्तो भएमा हामी आँफै पनि औषधि खाने गरेका छौं । यो कुरा पनि थाहा नहुनेहरूका लागि भने विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन् । हामीमध्ये कतिपयले याद […]
चारैतिर जङ्गल अनि बिचमा छ एउटा सुनसान घर । चितवन मुङ्लिङ सडक खण्डमा यात्रा गर्दै गर्दा यो घर निकै नै रहस्यमय देखिन्छ । बिचमा त्रिशुलि खोला अनि पारि भिरमा एकान्तमा एउटा मात्रै घर । यो घर कस्ले बनायो कहिले बनायो र यो घरमा को बस्छ होला ? यस्तै अनेकौ प्रश्नहरु यात्रा गर्दैगर्दा मनभरि खेल्ने गर्छन् […]
हाम्रो जिवनमा केही यस्ता कुराहरु हुन्छन् जसलाई हामी हरेक दिन देखे भोगको हुन्छौँ तर त्यस्तो कुरा तथा घटना हुनु पछाडिको कारण कहिल्यैपनि जानेका हुँदैनौँ र जान्ने कोसिस पनि गर्दैनौँ । हाम्रो दैनिक जिवन सँग सम्बन्धित केही रहस्य तथा तथ्य र त्यसमा लुकेको गुह्य वास्तविकता यस्ता छन्ः जिन्स पाइटको अगाडि पटि्टको गोजी माथि एउटा सानो गोजी […]
एजेन्सी । पश्चिमी अफ्रिकाको एक आदिवासी समुदायकामा एउटा अनौठो संस्कार रहेको छ । बोदाब्बे नामक आदिवासी समुदायमा प्रचलित उक्त संस्कारअनुसार पुरुषहरु एक अर्काका श्रीमतीहरुलाई चोरेर बिहे गर्दछन् । यसरी अर्काकी श्रीमती चोरेर बिहे गर्नु त्यो आदिवासी समुदायको पहिचान नै हो ।संस्कार अनुसार, त्यो समुदायमा पुरुषहरुको पहिलो विवाह भने घरपरिवार सँगको राजीखुसी मै हुने गर्छ । […]
नेपाली चलचित्र जगतकी चर्चित नायिका प्रियंका कार्की यतिबेला ग’र्भवती छिन् । प्रायः नायिका प्रियंकाका गतिबिधि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा आउछन् । उनले सेयर गर्ने प्रायः तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोल पनि बन्ने गर्छन् । यसै बिच पछिल्लो समय प्रियंकाका सबैजसो तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा तहल्का नै मच्चाइरहेका छन् । आफ्ना फ्यानका लागी प्रियंका र उनका श्रीमान […]
May 21, 2021 AdminLeaveaComment on लेटाङमा भेटियो मान्छे जस्तै हास्ने बोल्ने खोक्ने अचम्मको चरा, घर छाडेर जानै मान्दैन ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
मोरङको लेटाङमा एउटा अचम्मको चरा भेटिएको छ । जंगलमा घाइते अवस्थामा भेटिएको मैना चरालाई घरमा ल्याएर राखेको एक वर्ष पछी नै चरा बोल्न थालेको चराका मालिक मणि हर्क राई बताउछन । उनले पालेको चराले बोल्ने मात्र हैन जुन मान्छेको जस्तो स्वर छ त्यस्तै हुबहु निकाल्ने पनि गरेको छ । तर चराले दोहोरो अनुबाद भने गर्न […]
May 9, 2021 AdminLeaveaComment on बिग बोस सिजन १३ की प्रतियोगि रश्मि देसाई कोरोना महामारीमा कसरी बन्न पुगिन् भाइरल ? हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….
चर्चित टीभि एक्ट्रेस तथा बिग बोस सिजन १३ की प्रतियोगि रश्मि देसाई केही समय अघि देखी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहदै आएकी छिन् । उनले सञ्जालमा लगातार बोल्ड फोटो सुट समेत दिदै आएकी छिन् । अहिले आएर सामाजिक सञ्जाल तातिने गरि रश्मिले गरेको एउटा हट एण्ड बोल्ड डान्स सार्वजनिक भएको छ । यो उनले आफ्नो इन्ष्टा […]
May 9, 2021 AdminLeaveaComment on पति रोहन प्रितले नेहा मेरो टाउको दुख्यो भनेपछि यस्तो जवाफ दिइन् नेहाले, जवाफ सुनेर रोहनको रोकिएन् हासो !
भारतमा सबैको मनमा बस्न सफल गायिका नेहा कक्कड र उनका श्रीमान् रोहनप्रीत सिंह आफ्नो फ्यानहरुको लागि धेरै पोष्ट गरिरहन्छन् । पोष्ट गरेका कतिपय भिडियोमा मज्जाक गरिएको हुन्छ । यसपटक दुई जनाको एउटा फन्नि भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको छ । यो भिडियोमा रोहनप्रितको टाउको दुखेको हुन्छ । जस्को बारेमा रोहनप्रितले नेहालाई यहि कुरा बताईरहेका हुन्छन् […]